Efa nahazoana 100 tapitrisa Ar… : mpitandro filaminana ny atidohan’ny fisolokiana mpampindram-bola | NewsMada
Efa nahazoana 100 tapitrisa Ar… : mpitandro filaminana ny atidohan’ny fisolokiana mpampindram-bola
Tratran’ny polisy Sut teny Morarano Manakambahiny, ny alakamisy teo ireo olona roa voarohirohy ho nanao hosoka sy fisolokiana tamina orinasa iray mpampindram-bola. Vola mitentina 100 tapitrisa Ar mahery no efa lasan’izy ireo. Mpitandro filaminana ny atidohan’ity fisolokiana ity…
Saron’ny vela-pandrika nataon’ny polisy Sut eny Tsaralalana koa ireo olona roa hafa mpiray tsikombakomba amin’ireto mpitandro filaminana roa lahy ireto. Malaza ratsy amin’ny fanaovana hosoka sy fisolokiana ireto. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, nisy orinasa iray mpampindram-bola nametraka fitoriana tao amin’ny polisy Sut Tsaralalana, ny 8 febroary 2017 fa nisy olona nisoloky sy nanao taratasy sandoka tao amin’izy ireo. Fiara lehibe iray natao antoka tamin’ity findramam-bola ity, saingy hosoka ihany koa ny laharan’ilay fiara satria efa novain’izy ireo. Mailo avy hatrany ireo tompon’andraikitra tao amin’ity orinasa ity ka nanamarina avy hatrany teny amin’ny “centre immatriculateur” ka voamarina fa hosoka tokoa ny laharan’ilay fiara. Niroso tamin’ny fanadihadiana avy hatrany ny polisy ka fantatra taorian’izay fa eny Morarano Manakambahiny no miafina ireto olon-dratsy ireto. Natao ny vela-pandrika ka lehilahy iray sy vehivavy iray no voasambotra tao an-trano, ny alakamisy maraina teo. Nanoro ny namany iray mpiara-miray tsikombakomba aminy izy ireo. Niroso tamin’ny fisavana ny tranon’ireto olon-dratsy ireto ny polisy ka hita tao ireo fitaovana maro samihafa fampiasan’izy ireo rehefa manao hosoka. Toy ny fitombon-kasem-panjakana hosoka maromaro, kara-panondro hosoka maromaro, fanamarinam-ponenana hosoka, laharana fiara hosoka, fanamiana mpitandro filaminana, karatra ana zandarimariam-pirenena.
Tsy vitan’izay fa mbola anarana diso ihany koa no nampiasain’izy ireo nandritra ny fanadihadian’ny polisy. Niaiky izy ireo nandritra ny famotorana fa nanao fisolokiana sy taratasy hosoka. Nilaza izy ireo fa orinasa mpampindram-bola miisa enina eto an-dRenivohitra no efa nahazoan’izy ireo vola mitentina 100 tapitrisa Ar, ny taona 2016 ka hatramin’izao.